Sawiro khasaare xoog leh oo Maraykanka iyo Ciidamada uu ku shaqeysto lagu gaarsiiyay istish-haadiyo ka dhacday shabeelaha hoose – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Nov 7, 2020 614 0
askari Maraykan ah iyo afar Soomaali ah oo oo Maraykanka u daacad ahaa kana tirsan Ciidamada la yiraahdo Alpha Group ayaa ku dhintay 4 kale oo mid Maraykan yahayna waa ku dhaawacmeen kadib marki qarax nafhurnimo Xalay lagula beegsaday Deegaan Xeebeedka Gendershe ee Gobalka Sheebalaha hoose.
Ciidamadaan oo watay diyaarad iyo gaadiidka gaashaaman ayaa ka yimid dhanka Deegaanka kale ee Xeebta ku yaalla ee Jasiira kaasoo sodomeeyo kiilow mitir u jira Magaaalda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
waxay u muuqataa in Alshabaab ka war hayeen dhaqdhaqaaqa Ciidamada waxyana diyaarsadeen Gaari waxyaabaha qarxa lagu raray oo Naftii hure kaxeynayay markii ay k u dhaw yihiin deegaanka ayuna la beegsaday Ciidamada isbaheysanayay.
Warka kasoo baxay Taliska Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa lagu lagu Xaqiiyay in ay Marayakaykanka iyo askarta Xulfada la la ah beegsadeen.
“Camaliyad istish-haadi ah oo mujaahidiintu ay ciidamo saliibiyiin iyo murtadiin ah kula beegsadeen deegaanka Gendershe ayay ku dileen Askari American ah iyo 4 katirsan maleeshiyaadka Alpha Group” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay XSHM.
inkastoo Ciidamada Duulaanka soo qaaday deeganaanka Gudaha u galeen markii saxiibadood qaarna dhinteen qaarna dhaawacmeen kadib hadana Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa dib ula wareegtay Deeganka Gendershe oo hoos taga Magaalada Marka ee Gobaka Shabaeelaha hoose.
Ciidamadu waxay awoodi waayeen in ay qaataan qeybo mid ah jirka askarta laga dilay oo go’go’ay iyo agab Ciidan intaba.
Sawiro la soo qaaday ayaa Muujinaya khasaare na fiyo maalba leh oo gaaray Ciidamada Soo duulaan tegay.
waxaa la arkayaa lugaha askar Soomaalida ah oo qaraxu dilay iyo qalab ciidan oo ay ku jiraan booshash, qasnado, rasaas, Koofiyadaha adag ee Ciidamada, doorbinta fogaan araga ah iyo qalab Caafimaad oo ay ka carareen Ciidamada Marayakanka iyo kuwa u shaqeynaya ee Soomaalida ah.
Axmad 3447 posts 8 comments
Inkabadna 10 Askari Kenyaati ah Oo ku dhintay Burbur Diyaaradeed.
Axmad	 Jun 24, 2021 0
Warbixin: Dagaalka Gobolka Tigreega ee Wadanka Itoobiya Oo Soo laba…